आज काठमाडौँका यी क्षेत्रमा तीन घण्टा बत्ती जाने ! – eSidhakura
मुख्य पृष्ठसमाचारआज काठमाडौँका यी क्षेत्रमा तीन घण्टा बत्ती जाने !
आज काठमाडौँका यी क्षेत्रमा तीन घण्टा बत्ती जाने !
काठमाडाौँ । काठमाडौँको महाराजगञ्ज वितरण केन्द्र अन्तर्गतका क्षेत्रहरुमा आज बत्ती जाने भएको छ । महाराजगञ्ज, कपनमार्ग, मण्डिखाटार, रुद्रमती, फाट, गोल्फुटारलगायत ठाउँमा आज तीन घण्टा बत्ती जाने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यस्तै आज प्रदेश–२ को जनकपुरमा रहेको राजविराज वितरण केन्द्रअन्तर्गतका फिडरहरुमा मर्मतको काम गर्नुपर्ने भएकाले बिहान ९ बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म लाइन जाने छ । यो वितरण केन्द्रअन्तर्गतका फिडरमा ३३ केबी क्षमताको लाइनको काम गर्न लागिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।